Taichung Festival na-emepe emepe na Taiwan ma nye nnukwu onyinye
Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Taichung Festival na-emepe emepe na Taiwan ma nye nnukwu onyinye
Obodo Taichung na-ebido emume mbụ ya - 2019 Taichung ppingzụ ahịa - site na July 10 ruo August 18, na-enye ndị ọbịa ego, ọrụ n'efu na onyinye mmesapụ aka. A nabatara ndị njem nleta ịga leta na ịzụ ahịa na Taichung n'oge ọkọchị - ma weghachite nnukwu onyinye.
Ndepụta a na-agbata n'ọsọ gụnyere ụlọ obibi karịrị NT $ 10 nde (US $ 323,000), ụgbọ ala 5 deluxe nke ọ bụla bara uru na gburugburu NT $ 1 nde dollar (US $ 32,300), Kupọns 6 maka nnwere onwe na ụlọ ndị isi na họtel obodo, igwe eletriki eletrik 6. , na ọtụtụ onyinye ndị ọzọ.
N'ime oge emume izu isii, onye njem nleta na-azụta ihe NT $ 500 kacha nta na ụlọ ahịa ndị edere na Taichung nwere ike ịga ịntanetị iji debanye aha maka ihe nrite.
Ebumnuche nke nkwalite ndị njem dị iche kwa izu, yana mkpọsa banyere ụlọ, ihe ịchọ mma, ihe ncheta, ọrụ agbamakwụkwọ, ejiji, na nri. Onyinye a na-adị iche kwa izu iji kpalie ndị njem na ndị ahịa. A na-agbakwa ndị njem ume ibudata ngwa maka egwuregwu eziokwu na-abawanye ụba iji chịkọta isi iji gbanye onyinye na ụlọ ahịa ndị nkwekọrịta.
Tourlọ Ọrụ Njegharị na Njem nke Gọọmenti Taichung City na-ahazi ihe omume dị iche iche iji jeere ndị hụrụ nka na ndị egwu egwu egwu. Thelọ ọrụ ahụ na-agba ndị njem nleta ume ịhazi ụbọchị atọ ịnọ n'obodo ahụ iji nwee obi ụtọ Daan Sand Sculpture na Music Festival na Taichung Hot Springs Festival.
ememme Government Music Taiwan Tourism
Enyi kacha mma Animal Society na-ewebata ụlọ nkwari akụ mbụ
Hamburg: Elbphilharmonie 10 nde ọbịa